तराई/मधेशको अधिकारका लागि भन्दै नेपाली कांग्रेस परित्याग गरी आन्दोलनमा होमिने नेता हुन् महन्थ ठाकुर । कांग्रेसबाट बाहिरिएपछि तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरेका ठाकुरले मधेशमा सक्रिय ६ दल मिलाएर राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बनाए । त्यसपछि राजपा र समाजवादी पार्टीसँग एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बनेको थियो । तर पार्टीम विवाद बढ्दै जाँदा दुई पक्षबीचको आधिकारिता विवादमा उनी पराजित भए ।
आफ्नै पार्टीको बहुमत पक्षले ‘प्रतिगमनकारी’सँग साँठगाँठ गरेको आरोपमा कारबाही गरेको छ । जनकपुरमा भेटिएका ठाकुरले भने ‘हामी ठीक छौं । अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा उनले ‘हामी सरकारमा गएर गल्ती गरेका छैनौं’ भनेर जनतालाई भन्न मधेश आएको सुनाए ।
आफू कमजोर नभएको बरु, जनमन्थनबाट शक्ति आर्जन गर्नेसमेत ठाकुरले सुनाएका छन् । उनीसँग अनलाइनखबरकर्मी श्रवण देवले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
अन्तिम नतिजा भनेर सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसला आएको छैन् भन्न खोज्नुभएको हो ?
सर्वाेच्चले तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टीलाई ब्यूँताउन पनि सक्छ भन्ने बुझाइ हो ?
को प्रतिगामी छैन भन्नुस् त ? आफ्नै पार्टीकै मान्छे गिराएर अर्काे गठबन्धनमा जाने प्रतिगामी भएनन् ? १०/२० बर्षको इतिहासलाई हेर्ने हो भने सबै प्रतिगमी भइसके ।
३२ दललाई छाडेर प्रचण्ड प्रतिगामीतिर गएकै हुन् । जनआन्दोलनको समयमा दिल्लीमा कुराकानी हुँदा सबैलाई हेरिसकेको छु । आन्दोलन पनि गर्ने अनि राजालाई बिन्ती पत्र लेख्ने कुरा पनि यही नेताहरुले गरेकै हुन् ।
राजनीतिक फैसला त शिर काटेपछि पनि हुन्छ । राजा वीरेन्द्रलाई मारेपछि अर्काे राजा भयो । तर सामाजिक र आर्थिक परिवर्तन त्योभन्दा कठिन छ । आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनमा नयाँ कुरालाई एक्सेप्ट नगरिए समय त लाग्छ ।